फर्मासिस्ट र धनी विवाद : यस्तो छ औषधि व्यवस्था विभागले ऐनको अपव्याख्या गर्दै गरेको निर्णय :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
फर्मासिस्ट र धनी विवाद : यस्तो छ औषधि व्यवस्था विभागले ऐनको अपव्याख्या गर्दै गरेको निर्णय फार्मेसी काउन्सिल कानुनी बाटोमा जाने तयारीमा
कमला गुरुङ सोमबार, फागुन २४, २०७७, १५:२३:००
काठमाडौं - फार्मेसी पेशाका विषयमा यतिबेला फार्मेसी पसलको धनी र औषधिको बिक्रि वितरण गर्ने फर्मासिस्ट, फार्मेसी सहायक र व्यवसायी एकै हुने वा फरक फरक हुनुपर्ने भन्ने विषयमा विवाद चलिरहेको छ।
धेरैले औषधि ऐन अनुसार धनी र फर्मासिस्ट, फार्मेसी सहायक र व्यवसायी फरक नहुँदा औषधिको बिक्रि वितरणमा समस्या आइरहेको बताउँदै आइरहेका छन्। केहीले फार्मेसी पसलको धनी फरक व्यक्ति र औषधि बिक्रि वितरण गर्ने फरक हुनुपर्नेमा पनि आवाज उठाइरहेका छन्।
औषधिको बिक्रि वितरणलाई नियमअनुसार गराउन र विकृति रोक्न फार्मेसीका धनी र बिक्रि गर्ने व्यक्ति एकै हुनुपर्नेमा धेरैको जोड छ। फरक फरक हुँदा फर्मासिस्टको लाइसेन्स भाडामा लगाउने क्रम बढेको र फार्मेसी पेशामा विकृति भित्रिएको भन्दै धेरैले यसमा चासो पनि दिइरहेका छन्।
फार्मेसी पेशामा यो विवाद लामो समयदेखि नै चल्दै आइरहेको छ। तर पछिल्लो केही समयता भने विवाद तीव्र रुपमा अगाडि बढीरहेको छ। फार्मेसी पेशामा यो विवाद आउनुको मुख्य कारण भने औषधि व्यवस्था विभाग देखिएको छ। विभागले औषधि ऐनको अपव्याख्या गर्दै फार्मेसी पसल सञ्चालन गर्दा धनी र फर्मासिस्ट, फार्मेसी सहायक र व्यवसायी फरक हुन पाउने निर्णय गरेका कारण नै यो विवाद आइरहेको हो।
विभागले ऐनको अपव्याख्या गर्दै उक्त व्यवस्था गरेपछि फर्मेसी काउन्सिलले उक्त कुरा सच्याउन विभागमा पत्राचार समेत गरेको छ। तर विभागले हालसम्म उक्त विषयमा निर्णय दिन सकेको छैन। विभागले निर्णय नदिएपछि काउन्सिलले कानुनी लडाइँ लड्ने तयारी गरिरहेको छ। काउन्सिलको यहि तयारीका कारण पनि पछिल्ला दिनमा यो विषयमा विवाद चर्किएको हो।
के छ ऐनमा व्यवस्था?
फार्मेसी सञ्चालन गर्दा फर्मास्टि, फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी आफैँले औषधिको बिक्रि वितरण गर्नुपर्ने औषधि ऐन २०३५ को दफा १७ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
तर विभागले ऐनमा रहेको उक्त व्यवस्था विपरित विभागीय निर्णय गर्दै धनी र व्यवसायी छुट्टा छुट्टै हुनु पाउने निर्णय गरेको थियो।
विभागले फार्मेसी सञ्चालन गर्न धनी र व्यवसायी छुट्टा छुट्टै हुन पाउने निर्णय २०७१ साल ७ महिना १७ गते गरेको थियो। विभागको उक्त निर्णयकै कारण फर्मासिस्टहरुको लाइसेन्स भाडामा लगाउने लगायतका विकृति भित्रिएको काउन्सिललको भनाई छ।
यस्तो छ विभागले गरेको निर्णय
औषधि ऐन २०३५ को दफा १० बमोजिम औषधि बिक्रि वितरण गर्न व्यक्तिले आफ्नो नाम र पसल वा फर्म विभागमा तोकिए बमोजिम दर्ता गराई तोकिएको दस्तुर तिरी प्रमाण पत्र लिनुपर्ने र दफा १७ को उपदफा बमोजिम चिकित्सकको प्रेशक्रिप्सन बिना बिक्रि वितरण गर्न नहुने भनी समुहिकृत गरिएको औषधिहरुको बिक्रि वितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहयाक वा व्यवसायी आफैले बिक्रि वितरण गर्नुपर्ने र फर्मासिस्ट वा व्यवसायी बाहेक अरुले त्यस्तो औषधि बिक्रि वितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा व्यवसायीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने भनी व्यवस्था रहेको तर धनी र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुनुपर्ने विषयमा ऐनमा व्यवस्था नभएको हुँदा महाशाखाबाट पेश भए बमोजिम हुन उपयुक्त देखिन्छ।
विभागले औषधि ऐनलाई अपव्याख्या गर्दै फार्मेसी सञ्चालन गर्दा धनी र व्यवसायी फरक हुन पाउने निर्णय गरेको नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका रजिष्ट्रार संजीव कुमार पाण्डेयले बताए।
उनले भने, ‘विभागले ऐनको अपव्याख्या गर्‍यो। ऐनमै औषधिको बिक्रि वितरण गर्ने व्यक्ति भनिएको छ। औषधिको बिक्रि वितरण गर्ने व्यक्ति धनी हो त? कानूनले स्पष्ट लेखेको छ’ उनी प्रश्न गर्छन, ‘ऐनमा जुन कुरा छैन। त्यो निर्णय गर्ने हो त?’
औषधिको बिक्रि वितरण अनधिकृत व्यक्तिबाट भइरहेको भन्दै परिषदले फागुन ७ गते फार्मेसी पसलको धनी र व्यवसायी एकै हुनुपर्ने भन्दै विभागलाई पत्र लेखेको थियो।
विभागले यो विषयमा १५ दिनभित्र निर्णय नगरे कानूनी बाटोमा जान बाध्य हुने काउन्सिलले बताएको थियो। विभागलाई काउन्सिलले दिएको १५ दिनको समय आइतबार सकिएको छ। तर विभागबाट हालसम्म कुनै पनि लिखित निर्णय प्राप्त नभएको रजिष्ट्रार पाण्डेय बताउँछन्।
‘लिखित रुपमा निर्णय नआए बाध्यकारी रुपमा हामी कानूनी रुपमा जानुपर्छ’ उनले भने।
काउन्सिलले दुई सातादेखि नै धनी र व्यवसायी फरक हुनेहरुको नाम दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्रमाणीकरण समेत रोकेको छ।
उनले भने, ‘हामीले धनी र व्यवसायी एकै हुनेको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिरहेका छौ। तर धनी र व्यवसायी फरक हुने फार्मासिस्टलाई हामी अनुरोध गर्छौ। उहाँहरु आफैँ कन्भिन्स हुनु भयो भने ठिक छ। नभएको ठाउँमा हामीले प्रमाणीकरण गरेका छैनौं।’
नाम दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण आवश्यकता र औचित्य हेरेर मात्र पुष्टि गरिने उनले बताए।
विभागले आफ्नो निर्णयलाई तत्काल परिमार्जन गरी धनी र व्यवसायी एकै हुनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्नेमा रजिष्ट्रार पाण्डेयको जोड छ। धनी र व्यवसायी फरक हुने विभागको निर्णयले गर्दा फार्मेसी पेशामा विकृति देखिएको उनले बताए।
उनले भने, ‘यो हाम्रो मात्र चाँसोको विषय होइन। यो जनस्वास्थ्यको चाँसोको विषय हो। जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो।’
औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले धनी र व्यवसायी एकै हुनुपर्ने विषयमा काउन्सिलले पठाएको पत्र बारे कुनै निर्णय भइनसकेको बताए।
उनले भने, ‘काउन्सिलले धनी र व्यवसायी एकै हुनुपर्ने भन्दै पत्र बुझाएको थियो। हाम्रो निर्णय भएको छैन।’